Bit By Bit - Hordhac - 1.4.1 Readymades iyo Custommades
Cilmi Bulshada ee da'da digital lug doonaa Readymades, Custommades, iyo Beelaha awood badan.
Mid ka mid ah lagu kaadiyo ugu caansan ee abid lagu iibsaday ee 1917, oo lagu kaadiyo waa, in qaar ka mid ah siyaabaha, si la mid ah in badan oo cilmi bulsho ee da'da digital. kaadiyo ee su'aasha lagu iibsaday by artist Faransiiska Marcel Duchamp. Ka dib waxaa iibsiga, Duchamp qortay "R. Mutt 1917 "waxa on dibna la odhan jiray Isha abuurka uu (Jaantuska 1.2). Inkasta oo ay qaabilaadda hore u ahaa qandac ah, Isha ayaa u yimid inuu tixgeliyo mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsan ee farshaxanka casriga ah, sababtoo ah waxaa aasaas bedelay sida ay dadku ka fekeraan tahay (Higgins 2004) . Isha waa tusaale ka mid ah Readymade ah, halkaas oo artist ah arka wax hore u jirta dunida ka dibna waxa repurposes sida farshaxanka.
Jaantuska 1.2:. Isha by Marcel Duchamp Isha waa tusaale ka mid ah Readymade ah, halkaas oo artist ah arka wax hore u jirta dunida ka dibna hal-abuur u repurposes fanka. Ilaa hadda, wax badan oo cilmi bulsho ee da'da digital ayaa ku lug xogta repurposing abuuray ujeeddo qaar kale oo aan ahayn cilmi. Photo by Alfred Stiglitz, 1917. Source: Wikimedia Commons .
Inta ugu badan ee cilmi-baarista bulshada ee da'da digital ayaa, ilaa hadda, waxay lahaayeen qaab la mid ah, inkasta oo aan ilaa xad la natiijo la mid ah. Cilmi ayaa ogaaday in diiwaanka digital abuuray by dawladaha iyo shirkadaha for gaar ujeeddooyin-sida ay Guda telefoonka, qoraallada si digital ah, iyo warbaahinta bulshada xog-kartaa in la repurposed cilmi bulsho (Lazer 2015) . In si kale loo dhigo, wax badan oo cilmi bulsho ee da'da digital ayaa search a for Data Readymades.
Si kastaba ha ahaatee, sida fanaaniinta badankiisu ma agagaarka socon raadinaya Readymades, ugu cilmi bulsho ee la soo dhaafay kuma ay socon agagaarka raadinaya xogta in la repurposed karo. Halkii, halkii isagoo data-driven, cilmi bulsho ugu guulaha badan ee la soo dhaafay ayaa su'aal-driven. Taasi waa, cilmibaadhe lahaa su'aal ka dibna laga helay ama abuuray macluumaadka loo baahan yahay in aad ka jawaabto su'aashaas. artist ah oo muujineysa qaab kale ah ee shaqada waa Michelangelo. Waxa uu doonayay inuu ka dhigo taallo a of David sidaasi darteed waxa uu ku qaatay 3 sano u hawshoonaya, iyadoo block a marmar ah si ay u abuuraan uu masterpiece (Jaantuska 1.3) David ma aha Readymade ah.; waa Custommade ah.
Jaantuska 1.3: David by Michaelangelo David waa tusaale ka mid ah tahay in si ula kac ah ayaa la abuuray,. waa Custommade ah. Style Tani waxay kasoo horjeedaa Readymades sida Isha (Jaantuska 1.2). cilmi Bulshada ee da'da digital lug doonaa Readymades iyo Custommades labadaba. Photo by Jörg Bittner Unna, 2008 Source: Wikimedia Commons .
cilmi Bulshada ee da'da digital lug doonaa labada Duchamps iyo Michelangelos, labada Readymades iyo Custommades. Buugani wuxuu sahamin doona labadan waji, iyo, ka sii muhiimsan, waxay ku tusi doonaa sida ay u la isku dari karaa hybrid awood leh. Tusaale ahaan, Yashuuca Blumenstock iyo asxaabtii ay ka qeyb Duchamp iyo qayb Michelangelo; waxay repurposed xogta phone call mobile (a Readymade) oo ay ka abuuray in ay xogta sahanka u gaar ah (Custommade a). Tani qasayso of Readymades iyo Custommades waa qaab ah in aad arki doonaa kitaabkan oo dhan.